प्रियंकाको आत्महत्या प्रयास ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रियंकाको आत्महत्या प्रयास !
प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०७२, सोमबार
एजेन्सी, यतिबेला भारतमा टेलिभिजन स्टार प्रत्यूषा वेनर्जीको आत्महत्याको समाचारले ठूलो स्थान पाइरहेको छ । आफ्नै घरमा पंखामा झुण्डिएको अवस्थामा प्रत्यूषालाई पाइएको थियो । टेलिभिजिन स्टारको आत्महत्याको खबर आइरहँदा बलिउडकी चर्चित नायिका प्रियंका चोपडाले पनि आफ्नो करिअरको सुरुवातमा ३ पटकसम्म आत्महत्याको प्रयास गरेको खुलेको छ ।
प्रियंकाका पूर्व म्यानेजर प्रकाश जाजूले ट्विटरमा उनको बारेमा केही खुलासा गरिदिएका हुन् । हुनत, सम्बन्धमा खटपट भएपछि प्रियंकाले प्रकाशसँगको संझौता रद्द गरिदिएकी थिइन् । उनले नायिका चोपडाको व्यक्तिगत बिषयमा बढी चासो देखाएको आरोप लगाइएको थियो । नायिका चोपडा कुनै समय निकै कमजोर रहेको उनको भनाई छ ।
उनले ट्विटमा लेखेअनुसार आज बलिउडमा स्टार बनेकी नायिका चोपडाले कुनै समय ३ पटकसम्म आत्महत्याको कोशिश गरेकी थिइन् । प्रियंका र उनका प्रेमी असिम मर्चेटविच खुबै झगडा पनि हुने गथ्र्यो । प्रकाशले लेखेका छन्(‘यही बिषयमा चोपडाले मलाई बारम्बार फोन पनि गर्थिन् । उनले ३ पटकसम्म आत्महत्या गर्ने कोशिश गरेकी थिइन् ।’
उनी सो समयमा खुबै कमजोर बनेकी थिइन् । उनले कहिले पूलबाट त कहिले अपार्टमेन्टबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्ने कोशिश गरेको प्रकाशको खुलासा छ । प्रकाशको यो ट्विटमा नायिका चोपडाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएकी छैनन् ।
काठमाडौं । बहुविवाह मुद्दामा अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । […]